ပါဝင်မှုကိုစွဲမြဲစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း - အနီရောင် Herring: Hook, Line နှင့် Stinker (Gabe Deem) မှ Prause & Pfaus စာအားပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သဘာ ၀ အရိပ်။
ငါဆက်ဆက်အတွက်တစ်ဦးတည်းမဟုတ် ငါ၏သင်္ချိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ယင်းနှင့် ပတ်သက်. နီကိုးလ် Prause & Jim Pfaus ED စက္ကူ (P&P) ။ မကြာသေးမီက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို ရစ်ချတ်အေ Isenberg MD အားဖြင့် Editor ကိုတစ်ဦးပေးစာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြှနျတေျာ့ဝေဖန်မှုပြုသကဲ့သို့တူညီလေ့လာတွေ့ရှိချက်များစွာကိုဖန်ဆင်းသော။
လေ့လာမှုတစ်ခု၏အရေးပါသောစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေသောအခါဓလေ့ထုံးတမ်းသည်အတိုင်း, လေ့လာမှုရဲ့စာရေးဆရာများတုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။ Prause ရဲ့ဟန်ဆောင်တုံ့ပြန်မှု "ဆိုတဲ့အနီရောင် Herring: Hook, လိုင်းနှင့် StinkerIsenberg ၏အချက်များ (နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှု) ကိုရှောင်ရှားရုံမက၎င်းတွင်များစွာသောပါ ၀ င်သည် အသစ် မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းများနှင့်ထင်သာမြင်သာမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များစွာ။ အမှန်မှာ၊ Prause ၏တုန့်ပြန်မှုသည်မီးခိုး၊ ကြေးမုံ၊ ဘေးထွက်မှတ်စုတွင်, ထွက်စစ်ဆေးပါ ဒီ twitter convo Prause သည်မိမိအများအပြားတရားဝင်ကန့်ကွက်ရန်ထိရောက်သောဖြေကြားမှုများအဘို့အ Isenberg အကြောင်းကိုကဲ့ရဲ့အစားထိုးရန်ကြိုးစားဘယ်မှာ:
"@DrDavidLey ငါထုတ်ဝေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကျိန်းသေငါအများဆုံးရယ်စရာအက္ခရာ။ ပထမဆုံးစာရေးဆရာကစာလုံးပေါင်း၊ သင်္ချာ၊
သူ၏စိုးရိမ်မှုများကိုအမှန်တကယ်ဖြေကြားမည့်အစားသူမသည်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကံဆိုးသည်။ သူမသည်တစ် ဦး spinning ခံရဖို့ပုံရသည် Big Fish ငါးပုံပြင် မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်မှားယွင်းစွာတင်ပြချက်များနှင့်အတူများပြား။ ငါ Prause ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူမပြန်ကြားချက်အတိုင်းငါပြောပြလိမ့်မည်။
Prause ရဲရငျ့စှာ Isenberg မှားခဲ့တာနှင့်သူမရှိခဲ့ကြောင်းဟုဆိုကာခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည် ပြီးပြီ 280 သင်တန်းသားများအဘို့မှတ်:
"ရေးသားသူပါဝင်သူအရေအတွက်အတွက်" ကှာဟ "ကိုဖော်ပြပေမယ့်ကွာခြားချက်များမတည်ရှိ။ စားပှဲ 1 ပါ ၀ င်သူ ၂၈၀ ဦး ကိုပြသပြီး International Erectile Function (IIEF) ရမှတ်များပါ ၀ င်သည်။
ဤသည် Prause နေဖြင့်အများအပြားမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်များ၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကှာဟသူမ၏မူရင်းစာရွက်ထဲမှာတည်ရှိကြောင်း irrefutable ဖြစ်ပါသည်, ဤနေဆဲရှင်းပြခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Prause ယခု 234 ထံမှရရန်မလုပ်ပဲဘယ်လောက်ခန့်မှန်းဒေါက်တာ Isenberg,4ဖို့ 280 အခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်သူမကအခိုင်အမာစုစုပေါင်းဘာသာရပ်များရေတွက် subjects? ရိုးရှင်းတဲ့။ သူမသည်ယခုအခါပြောဆိုသော 5th လေ့လာမှု တည်ရှိ: Moholy နှင့် Prause (အောက်တွင်ဝိုင်း) ။ ဤသည်အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် မဟုတ် မူရင်း Prause & Pfaus ED စက္ကူမှာဖော်ပြထားတဲ့။ ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှဒါကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်မည်သည့်အခါကမျှလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းစာတမ်းသည်ယခုထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်သော (နှင့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သူများ) ရှိပြီးသားစာရွက်ပေါ်သို့သတ္တိရှိရှိနှင့်လျောက်ပတ်စွာကိုင်တွယ်ထားသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေဖန့်ချိလို့ရမယ်၊ ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်တယ်၊ အချက်အလက်တွေပါ ၀ င်ပြီး ၄ င်းရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်။ ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပါ
မူရင်း P&P ED စာတမ်းသည်အကြောင်းအရာနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုဤလေ့လာမှု (၄) ခုမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်ဟု (မှားယွင်းစွာ) ဖော်ပြခဲ့သည်။လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2, လေ့လာမှု 3, လေ့လာမှု 4):
"နှစ်ရာရှစ်ဆယ်ယောက်ျားကိုကျော်ပါဝင်ခဲ့ လေးကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာတို့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုထုတ်ဝေသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာရှိပါတယ်ပြီ [33-36]"
မူရင်း ED စက္ကူတိဖြစ်တယ်, သို့မဟုတ်လက်ရှိတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု 5th အပေါ် tacking ဖြစ်စေ, လက်မခံနိုင်လေ့လာမှုအနည်းငယ်-of လက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် 5th စက္ကူစားပွဲရှိအခြားအမျိုးအစားများမှဘာသာရပ်များထည့်သွင်းမထားဘူး? သူမ၏စားပွဲ (အထက်) ၏ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ အလွန် Fishy အမှန်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏မူလဝေဖန်မှုတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း ၂၈၀ သည်ခေါင်းစဉ်မရှိသောအရေအတွက်သာဖြစ်သည်။ P&P စက္ကူမှာအမျိုးသား ၂၈၀ (sic) ရှိ ED နှင့်ပတ်သက်သည်ဟုထင်ရသည် အစီရင်ခံတင်ပြ သာ 127 ယောက်ျား (IIEF) အတွက် erectile လည်ပတ်ရမှတ်များ။ ထို (ပင်မခေါင်းစီးများမှ ၂၈၀ ထက်များစွာနိမ့်ကျနေပြီး) ထိုကိန်းဂဏန်းကို ED စက္ကူအနားယူရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အခြေခံလေ့လာမှု ၄ ခုမှမထောက်ခံပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ P&P ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် ပြောဆိုထားသည် 127 (သို့မဟုတ် 133) လူတို့သညျ IIEF ယူ. , ဒါပေမယ့်အခြေခံလေ့လာမှုများအစီရင်ခံကြောင်း သာ 47 ဘာသာရပ်များ။ ဒါဟာထင်ရှားတဲ့ကွာဟမှုနေဆဲရှင်းပြခဲ့ရသေးပါ။
သူမ၏စားပွဲတစ်စက္ကန့်လှည့်-of လက်ဖော်ပြသည်။ Prause ယခု (ထို 92 လေ့လာမှု 1 မှ4ယောက်ျား, မလုပ်ပဲMoholy et al), အဆိုပါ IIEF ယူခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြဿနာ: အထူးသဖြင့်လေ့လာမှု IIEF မဖျောပွထားစေသည်။ ကြောင်းလေ့လာမှုစာရင်းများကို: ပြဿနာ, ဒုတိယ, အများကြီးပိုကြီး သာ 61 အထီးဘာသာရပ်များ (စားပွဲ 1 pg 4) ။ Oh uh, 31 ငါးကွယ်ပျောက်တယ်ပုံပါဘဲ။
Prause ၏အခိုင်အမာအသစ်၏အကျဉ်းချုပ် -
Prause အဘယ်သူမျှမကသူ့ဘာသာရပ်-ရေတွက်5မှတက်ရဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်စစျဆေးနိုငျတဲ့ 280th အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုတက် conjures: Moholy နှင့် Prause (ပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာ) ။ ဤတိုးတက်မှုအသစ်သည် P&P ED စာရွက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောအပို ၅၂ ယောက်ကိုမူရင်း P&P ED စာရွက်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မျှတွေ့နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါ IIEF များအတွက် 127 ယောက်ျားရ, Prause 92 ပျောက်ဆုံးနေယောက်ျားအတွက်တစ်နည်းနည်းနဲ့စည်းဝေးသောကိုကြေညာ Moholy et al. ကံမကောင်းစွာပဲ, အဲဒီလေ့လာမှုမ IIEF မြွက်နှင့်စာရင်းများကိုသာ 61 အထီးဘာသာရပ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ငါထပ်တိုးကွာဟမှုနှစ်ခုနှင့်မှားယွင်းစွာတင်ပြချက်များအတွက်ရှစ်ဖို့ add ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ကြှနျတေျာ့မူရင်းဝေဖန်မှု။ စကားမစပ်အထက်၊ ၁ နဲ့ ၂ ကသူမကို“ စာပိုဒ်” နဲ့စတင်ပါတယ်။secondary ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ... "အနတ္တ။
တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာတဲ့အမျိုးမျိုး arousal စကေးအသုံးပြု
ခေါင်းစီးသတင်း P&P ED စာတမ်းအတွက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တက်စေသည်ဟုတသမတ်တည်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင်, ဂျင်မ် Pfaus မဟုတ်မမှန်တစ် ဦး အတွက်ပြောဆိုထားသည် တီဗီအင်တာဗျူး P&P ကဓာတ်ခွဲခန်းမှာစိုက်ထူဖို့အမျိုးသားတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့တယ်။ Pfaus လည်းမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြခဲ့သည်:ကျနော်တို့ကိုသူတို့အိမ်မှာကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏနှင့်အတူတစ်ကှနျ့ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ဥပမာသူတို့အနေနဲ့စိုက်ထူရသော latency ပိုမြန်။ "
အမှန်မှာ၊ လေ့လာမှုကအမျိုးသားများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ပြီးနောက်သူတို့၏နှိုးဆော်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးရန်သာတောင်းဆိုခဲ့သည်။ စိုက်ထူသို့မဟုတ် latency အဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်ခဲ့ကြသည်။ တွေ့ရှိချက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအမျိုးသားများထက်သူတို့၏နှိုးဆော်မှုကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒါခေါ်တယ် ာင်းမဟုတ်ဘဲ "ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်" ။ P & P ၏စွပ်စွဲချက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုကြီးထွားစေနိုင်ကြောင်းပြောကြားချက်သည်တူညီသောနှိုးဆွမှုအတိုင်းအတာနှင့်တူညီသောနှိုးဆွမှုများကိုအသုံးပြုသည့်လေ့လာမှုလေးခုစလုံးအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မဖြစ်ပျက်။
Prause သည်သူမ၏အခြေခံလေ့လာမှု (၄) ခုအနက်မှတစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းအတွက်တူညီသော“ နှိုးဆွသည့်အတိုင်းအတာ” ကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းရှင်းပြရန်ကြိုးစားသည်။ ဒီမှာမူရင်း P&P ED စာတမ်းမှာတကယ်ပြောထားတာက -
အမျိုးသားများအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုဖော်ပြရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည် အလွန်အမင်း "1 မှ 9" မမှာအားလုံး "။ "
Isenberg နဲ့ကျွန်မထောက်ပြသကဲ့သို့, အဆိုပါ 1 ၏4သာ အခြေခံလေ့လာမှုများတစ်ဦးကိုသုံး 1 စကေးမှ9။ တစ်ခုက ၀ မှ ၇ စကေးကိုသုံးတယ်၊ တစ်ခုက ၁ မှ ၇ စကေးကိုသုံးတယ်၊ လေ့လာမှုတစ်ခုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမဖော်ပြဘူး။ ပို၍ ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်မှာ P&P စက္ကူရှိလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုပြပုံသည် ၁ မှ ၇ စကေးကိုအသုံးပြုသည်။ မူရင်းစက္ကူတွင်ထင်ရှားသောအမှားနှစ်ခု
မူရင်းစက္ကူ၏မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များနှင့်ဂရပ်အမှားများအတွက်တောင်းပန်မည့်အစား Prause သည် Isenberg မှသုတေသီများအားသင်ခန်းစာပေးသည်။ သီအိုရီအ ကွဲပြားခြားနားသောအရေအတွက်ကအကြေးခွံတွေနဲ့ပြုပါ:
"စာ၏ရေးသားသူလည်းမှားယွင်းသောစာရင်းအင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်:" ကွဲပြားခြားနားသော Likert အကြေးခွံကနေရလဒ်တွေကို poolable ကြသည်မဟုတ် "။ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်! တကယ်တော့သူတို့ကိုအနည်းဆုံးနည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိပါတယ်။
၎င်းသည်သိရန်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော် Prause သည်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုလေးခုကိုစုစည်းထားကြောင်းလုံးဝပြသခြင်းမရှိပါ။ (၁) သူမပြောတာက (၂) လေ့လာမှုတစ်ခုမှာစကေးမရှိဘူး၊ ဘယ်နည်းကိုမှသုံးလို့မရဘူး၊ (၃) သူမရဲ့အစောပိုင်းအမှားတွေကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်၊ ဒီတစ်ခုအသိအမှတ်ပြု?
မသာလေးပါးအခြေခံလေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသော arousal အကြေးခွံ (သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ) ရှိခဲ့ပါဘူး, သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်အသုံးပြုသောလေ့လာမှုများနှစျယောကျ3မိနစ်ရုပ်ရှင်; တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ဦးကိုသုံး 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်; တလေ့လာမှုကိုအသုံးပြု သာဓာတ်ပုံများ။ မည်သည့်သုတေသီကမျှထိုသို့ ပြုလုပ်၍ ခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုမမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ ကောင်းပြီ ရုပ်ရှင်ဓါတ်ပုံထက်ပို arousal များမှာ။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကမူလ P&P ED စာတမ်းပါ မဟုတ်မမှန် တောင်းဆိုချက်များ အားလုံး4လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့:
ဒီတော့ Prause ကဒီထင်ရှားတဲ့အတိုင်းအတာအားနည်းချက်နှင့်သူမ၏လေ့လာမှု၏မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သနည်း။ နှင့်အတူ အခြား ရဲရင့်အတွက်မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု:
"စာရေးသူလည်းလေ့လာမှုများအကြားမတူညီကြလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှားယွင်းသောကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်းနှင့်ဤ "မဟုတ်ခဲ့ထိန်းချုပ်ထား” ကျွန်ုပ်တို့၏မူလဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလှုံ့ဆော်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း (“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်ရုပ်ရှင်အရှည်နှင့်ကွဲပြားမှုမရှိသောကြောင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်လေ့လာမှုများတွင်အချက်အလက်များပြိုကျသွားသည်”, p ။ E4) ။
ပထမ ဦး ဆုံးမှားယွင်းသောဖော်ပြချက် -“ လှုံ့ဆော်မှုများကို [ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမပြုရသေး]” ဟု Dr. Isenberg မှမည်သည့်နေရာတွင်မျှမပြောခဲ့ပါ။
ဒုတိယအချက်အယူမှားကြေညာချက်: အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု ကွဲပြားခဲ့ပါ လေ့လာမှုများအကြား:3မိနစ်ရုပ်ရှင်, 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်, ဓါတ်ပုံများ။
ဤနေရာတွင်“ Controlled for” သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့် Prause ကသူမမဖြစ်နိုင်သည့်အရာအားသူမမှော်အတတ်စီမံနိုင်ပုံကိုပြောရန်ငြင်းဆန်သည်။ မှုအတွက်ထိန်းချုပ်မှု အခြားအ3မိနစ်ညစ်ညမ်းဇာတ်ကားစောင့်ကြည့်နေချိန်တွင်အချို့သောယောက်ျားတွေ, ဓါတ်ပုံများကြည့်ရှု။
"နောက်ဆုံးတော့နောက်တဖန် စာရေးသူ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ မည်သည့်လေ့လာမှုတွင်“ လိင်တူချစ်သူလေးယောက်” ရှိခဲ့သနည်း.
Dr. Isenberg ၏“ လိင်တူချစ်သူ” အကြောင်းတစ်ခုတည်းသောရည်ညွှန်းချက်မှာ Prause ၏လေ့လာမှုအရသူ၏ဇယားတွင်“ ဂေး ၄ ခုအပါအ ၀ င်” စာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။Multidimensional စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ကိုထိခိုက်ဘို့ဘက်လိုက်မှု: တစ်ခုကတစ်ဦးချင်း Difference အမြင် (2013, Prause, Moholy, Staley) ။ ကြောင်းလေ့လာမှု၏စာမျက်နှာ2မှ။
"စုစုပေါင်း 157 (N=47 အထီး, 1 Transgender များ) အသက်အရွယ် 18 နှစ်အတွင်းစိတ်ပညာကျောင်းသားများကသင်တန်းအကြွေးများအတွက်လဲလှယ်ပါဝင်ခဲ့။ အများစုကလိင်ကွဲဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ လေးယောက်ျားလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်ခြင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် နှင့် လေးရိုးရိုးဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြ။ "
လိင်တူချစ်သူလေးယောက်ဒေါက်တာ Isenberg ပြောကြားသကဲ့သို့ Isenberg သည်4ကိုဆိုလိုသည်4ကိုသိရန်လုံလောက်သောသင်္ချာနည်းသည်။
Dr. Isenberg သည်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသား ၄ ယောက်အားဘာကြောင့်စားပွဲတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သနည်း။ ဒါဟာလိင်တူချစ်သူနှင့်ဖြောင့်ယောက်ျားသောကောင်းစွာထူထောင် (နှင့်ဘုံသဘောမျိုး) ပါပဲ အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုများ လိင်ကွဲ porn ကိုရန်။ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအပါအ ၀ င်၊ Prause ကဲ့သို့“ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု” ရလဒ်များနှင့်သူမရရှိသောဆက်နွယ်မှုများကို skews ။ ဒါဟာသူမ၏တွေ့ရှိချက်မေးခွန်းထုတ်သို့ခေါ်ဆိုသည်။
In ဦးနှောက် စွဲ, ဒါမှမဟုတ် compulsive အပြုအမူအပေါ်လေ့လာမှုများ, ခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဘာသာရပ်များအပေါ်မူတည်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်ဘာသာရပ်များသည်လိင်တူချင်း၊ အသက်အရွယ်တူ၊ IQs များနှင့်များသောအားဖြင့်မှန်ကန်သောရလဒ်များရရှိရန်လက်ျာလက်အားလုံးဖြစ်ရမည်။ Prause သည်လိင်တူချစ်သူများအားလုံးကိုကြည့်ရှုသည့်ယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်လိင်ကွဲလိင်ခြားသူများရှိခြင်းအားဖြင့်စံသတ်မှတ်ထားသော protocol များကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုလေ့လာမှုများစွာကအတည်ပြုပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်မလုပ်နိုင်ပါ။1, 2, 3, 4, 5).
ဒါက Prause ရဲ့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် 2013 EEG လေ့လာမှု porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ခဲ့သည် သိသိသာသာဝေဖန်။ လေ့လာမှု၏ဘာသာရပ်များမှာ (အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ လိင်ကွဲများ၊ လိင်ကွဲမဟုတ်သူများ) ကွဲပြားသော်လည်း၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီသောအထီး + မိန်းမအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်လေ့လာမှု၏“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာ Prause သည်သူမ၌ဤအားနည်းချက် (ရောထွေးသောဘာသာရပ်များ) တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြောင်းကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည် လေ့လာချက်သူမကတစ်ဖန် porn စွဲ debunks ထိန်းသိမ်းထားရာ။ သူမ၏ SPAN Lab မှက်ဘ်ဆိုက်ကနေ:
အဘယ်အရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းမထုတ်ဝေရသေးသောလေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကိုသုတေသနနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးကို“ ပြိုကွဲစေ” ကြောင်းသူတို့၏ Twitter အကောင့်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြေငြာခဲ့သနည်း။
ဤအပိုင်းကိုအချို့သောရှင်းပြကြာပေမယ့်အားဖြင့်အခြားထငျရှားမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်မှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင် Prause။ အောက်ပါစာပိုဒ်တွင်ဒေါက်တာ Isenberg က P&P သည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီအသုံးပြုခြင်းကိုအပြည့်အဝဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည် တစ်နည်းပြောရလျှင် Prause သည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီများသည်ယခင်အပတ်၊ လ၊ နှစ်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ သို့မဟုတ်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုပြောရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ISENBERG -“ နာရီကြည့်ရှု့နိုင်သော parameter သည်ညံ့ဖျင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကပျမ်းမျှအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောအပတ်ကမိမိကိုယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက်လုံးဝကျန်ခဲ့သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုခုတ်လှဲဖျက်စီးပစ်ခဲ့သည့်လေးလံသောသုံးစွဲသူများဖြစ်သည့်ဘာသာရပ်များရှိပါသလား။ တိကျသေချာပြီးတိကျသောရည်ညွှန်းချက်မရှိလျှင်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းအချက်အလက်သည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့ ်၍ မရနိုင်ပါ။ ”
သူမက“ ငါတို့သိပြီးသားအရာအားလုံးကိုပြောခြင်းအားဖြင့် Prause ကတုံ့ပြန်သည်။တစ်ပတ်ကိုနာရီ":
စာရေးသူကလိင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်လို့မရဘူး။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ variable ကိုအနည်းဆုံး ၁၃ နေရာဖော်ပြထားပါတယ်။ (abstraction“ အပတ်စဉ်ပျမ်းမျှ” သည်“ တစ်ပတ်လျှင် VSS အသုံးပြုသောပျမ်းမျှနာရီအရေအတွက်ကိုဖော်ပြသည်” … .. )
ထပ်မံ၍ ဒေါက်တာ Isenberg သည်သိလိုသည်မှာ - သင်သည်“ သင် porn စတင်စကတည်းက” သို့မဟုတ်အခြားအချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြစ်သော“ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က” သို့မဟုတ်“ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်” အကြောင်းဘာသာရပ်များကိုမေးမြန်းနေပါသလား။ Prause သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖော်ပြသည့်စာပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကိုနောက်ထပ်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်ဖြင့်အဆုံးသတ်လိုက်သည်။
"မေးခွန်းအတိအကျအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်"သင်အတိတ်တစ်လအတွင်းမှာညစ်ညမ်းသုံးပြီးဘယ်လောက်တစ်ပတ်ကိုအချိန်ဖြုန်းခဲ့တာလဲ"သူတို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနာရီ (s) ကိုညွှန်ပြနိုင်သည့်များအတွက် descriptor ကို" နာရီ "အပါအဝင်တုံ့ပြန်မှု box ကိုအတူ။ "
P&P ED စာရွက်ကိုရှာဖွေပါ၊ ထိုသို့သောမေးခွန်းမျိုးကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါ (လွန်ခဲ့သောလကဖော်ပြသည်) ။
သီတင်းနှစ်ပတ်လျှင်တစ်ပတ်လျှင်နာရီများသည်သင့်လျော်သောအတိုင်းအတာဖြစ်သည်ဟုအငြင်းပွားမှုနှစ်ခုဖြင့်ချီးမွမ်းရေးသားသည်။ ဒေါက်တာ Isenberg သည်၎င်း၏“ သင့်လျော်မှု” အပေါ်မှတ်ချက်မပေးခဲ့ပါ။ ဘာသာရပ်များသည်မေးခွန်းကိုမည်သို့နားလည်သည်ကိုမသိဘဲအချက်အလက်များကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ။ မရပါဟုသူကထောက်ပြခဲ့သည်။ သူမသည် Isenberg ၏အချက်ကိုတုန့်ပြန်ရန်မမှန်မကန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် Prause ၏ပြောဆိုချက်သည်သူမဂုဏ်ယူစွာခေါင်းစဉ်တွင်သူမရည်ညွှန်းသည့်အနီရောင်သမင်လေးဖြစ်သည်။
တစ်ပတ်ကိုလက်ရှိနာရီထက် သာ. များသော Variables ကို
ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ် စုပေါင်း. အသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများကိုတစ်ခုမှာဖြစ်ပါသည်, ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်ငါထက်များသော (သို့မဟုတ်ထိုထက်မက) အပြာများကိုကြည့်သည့်အခါငါဘာကြောင့် PIED ကိုတီထွင်ခဲ့တာလဲ။ အစား သာ ယခု တစ်ပတ်ကိုနာရီ, variable တွေကိုပေါင်းစပ် porn- သွေးဆောင် ED အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပုံရသည်။ စာရေးသူများအနေဖြင့်ဒေါက်တာ Isenberg သည်အခြားပြောင်းလဲမှုများစွာကိုလေ့လာခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုအလေးအနက်ထားသည်။ porn-induced ED သည်ဒဏ္myာရီဖြစ်သည် (သူသည်အင်တာနက်ကိုကြည့်ခြင်း၏အသစ်အဆန်းပင်ဖြစ်သော်လည်းအရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာပင်)
ISENBERG -“ ထို့အပြင်စာရေးသူများသည်အမျိုးသားလိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောမိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားစုစုပေါင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၊ စတင်ခြင်းအသက်၊ အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုစသည့်သက်ဆိုင်သည့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိပါ။ [11,12]။ "
အထက်ပါဝါကျမှာတော့ဒေါက်တာ Isenberg နှစ်ခုဆန်းစစ်ကြောင်းသုတေသန၏နမူနာအဖြစ်နှစ်ခုလေ့လာမှုများကိုးကား အပိုဆောင်း variable များ: citation 11 တွင် '' ညစ်ညမ်းသောနှစ်များအသုံးပြုမှု '' နှင့် citation 12 တွင် '' အရွယ်ရောက်စကတည်းက porn အသုံးပြုမှု '' ကိုအသုံးပြုသည်။ Prause သည်နောက်စာပိုဒ်ကိုတိုက်ခိုက်သည် စာခြောက်ရုပ်ဒေါက်တာ Isenberg သည်နှစ် ဦး စလုံးလေ့လာမှုများသည်သူစာရင်းပြုစုထားသည့် variable တစ်ခုစီကိုအကဲဖြတ်သည်ဟုဆိုသည်။ သူသည်ငယ်ရွယ်သော ED ၌ညစ်ညမ်းသောအရာမဟုတ်ဟုမခိုင်လုံသောကောက်ချက်မချခင်သူမအနေဖြင့်ဘာသာရပ်များအားအရေးကြီးသော variable များအကြောင်းကိုဘာကြောင့်မမေးမြန်းခဲ့တာလဲဟုရှင်းပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပျမ်းမျှ Erectile ရမှတ်တကယ်တော့ပညာရေးညွှန်ပြ
Prause သည်ကြီးကြပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာဝန်ခံသော်လည်းသူမတောင်းပန်ခြင်း (ရဲရင့်ခြင်း) အတွက်နောက်ထပ်လွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းကိုထပ်လောင်းထည့်သင့်သည်။
IIEF သည်“ ၁၉ ခု” (စ။ E19) စကေးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တစ်နေရာတည်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ချိန်ခွင်သည်အမှန်တကယ် ၁၅ ခုရှိသည့်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ ရမှတ်များ၊ ရလာဒ်များနှင့်နိဂုံးချုပ်များသည်တိကျသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကြီးကြပ်မှုကြီးကြပ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်တောင်းပန်သည် ပုံမှန် erectile function ကို၏ညွှန်ပြ"
ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်မှုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း P&P သည်ပျမ်းမျှရမှတ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် 21.4 ထဲက 30 6- item ကို IIEF (ပျမ်းမျှအသက် 23) သည်။ ၎င်းသည်အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိသူများ၏ပုံမှန်ပုံမှန်စိုက်ထူသည့်လုပ်ဆောင်မှုမှဝေးကွာသည်။ တကယ်တော့ဒီရမှတ်ဖော်ပြသည် "ပျော့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု""အလယ်အလတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဆီသို့မြှောင်။
သို့တိုင်အဘယ်သူမျှမဒေတာများဆက်စပ်မှု IIEF ရမှတ် Porn အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ
Isenberg သည် P & P သည် IIEF ရမှတ်များနှင့်တစ်ပတ်လျှင်ကြည့်ရှုသည့်နာရီအကြားတွင်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း၎င်းတို့၏ပြောဆိုချက်အတွက်မလုံလောက်သောအချက်အလက်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအတွက်လည်းစိုးရိမ်ခဲ့သည်
ISENBERG: Erectile function ကိုရလဒ်တိုင်းတာမှုအတွက်စာရင်းအင်းတွေ့ရှိချက်များကိုစုစုပေါင်းချန်လှပ်ထားခြင်းက ပို၍ ပင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ မည်သည့်စာရင်းအင်းမှရရှိနိုင်သနည်း။ စာဖတ်သူများသည်နာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် erectile လုပ်ဆောင်ချက်တို့အကြားဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းသူတို့၏ခိုင်မာသောခိုင်လုံသောဖော်ပြချက်ကိုသာယုံကြည်ရန်စာရေးသူကစာဖတ်သူအားတောင်းဆိုသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်လက်တွဲဖော်နှင့် erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုစာရေးသူများ၏ပauthorsိပက္ခဖြစ်သည့်အခိုင်အမာအားဖြင့်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမရှိခြင်းသည်အများဆုံးကွာဟနေသည်။
Red Herring သည်ဤအရေးကြီးသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဆွဲထားသည်။ စာရေးသူ၏ကောက်ချက်ကို“ ချိတ်၊ မျဉ်းကြောင်းနှင့်စကင်နာ” ကိုမျိုချရန်ရည်ရွယ်သည်။
P & P ၏“ အားကောင်းသော” ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်
ဒုတိယစာပိုဒ်မှကောက်ယူရရှိသောအောက်ပါကောက်နုတ်ချက်အရ Isenberg သည် P & P ၏“ ခိုင်မာသော” ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟုဆိုထားသည်။ Prause သည်စာဖတ်သူအားမှားယွင်းစွာထင်မြင်စေရန်အဓိကစကားလုံးများကိုပြောင်းလဲပေးသည့်အတွက်ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
“ ယောက်ျားတွေအိမ်မှာလိင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရှုလေလေသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြင်းပြလေလေပိုပြီးခိုင်မာလာတဲ့တွေ့ရှိချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်။ တကယ်တော့ဒီရလဒ်ကို 'ခဲယဉ်းဝတ္ထု' အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ "
အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်? ပိုပြီး porn စောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူ သို့ masturbate နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံaလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အထက်ပါပြောဆိုချက်တွင် Prause (အပြာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း) မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုတောင့်တခဲ့သည်။သူတို့ရဲ့ "မိတ်ဖက်။ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး P&P ED လေ့လာချက်မှ -
“ အမျိုးသားတွေကသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်aမိတ်ဖက် နှင့်အလိုဆန္ဒများအတွက် တိုက်ပိတ်လိင်"
Prause က“ သူတို့” ကိုထည့်ပြီး“ တစ်ကိုယ်တည်းလိင်” ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ မေးခွန်းပုံစံ၏အမှန်မှာ“ လိင်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်aလက်တွဲဖော် "ဤညစ်ညမ်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံး porn ကြယ်ပွင့်နှင့်လိင်အကြောင်းအလွယ်တကူစိတ်ကူးယဉ်မိနိုင်သည်။ ဘာသာရပ်အမြောက်အများတွင်မိတ်ဖက်များမရှိသောကြောင့် (များသောအားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ၅၀%) ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။
အမှန်မှာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့) လိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောသက်သေသာဓကဖြစ်နိုင်သည် ာင်း, porn တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ် circuit ကို activation နှင့်တဏှာဖြစ်၏။ အသိတစ်ဦးမှရှေ့ပြေး, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်း၏သက်သေအထောက်အထားရှိနိုင်ပါသည်။
မကြာသေးမီကကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုနှစ်ခုအရပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ (တလိုတလား) ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီး၊ ပါဝင်သူများ၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်သည့်အခါထွန်းလင်းခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အနက် ၆၀% သည်မိတ်ဖက်များနှင့်နှိုးဆွခြင်း၊. အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုကနေ:
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်လိုသောဆန္ဒသည်အိပ်ခန်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်ဟုပြောဆိုရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ သတိရပါ၊ P&P ဘာသာရပ်များအတွက်ပျှမ်းမျှစိုက်ထူခြင်းရမှတ်များသည် ED ကိုပြသည်။
သူမ၏ပြန်ကြားချက်အကြောင်း Tweets & ရေးသားချက်များ Prause
ဤတွင်ကန ဦး Prause ပါ tweeting Isenberg ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုသူမတုံ့ပြန်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍
“ Red Herring: Hook, Line, နှင့် Stinker” ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်စရာကညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအုပ်စုများ၏ပြောဆိုမှုများကိုတုန့်ပြန်သည်။
နက်ဖြန်နေ့၌ Prause သူမ၏ SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဤရေးသား:
အံ့သြစရာ သင်အထက်တွင်ဖတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း Isenberg ၏ပြောဆိုချက်များသည်မှန်ကန်ပြီး Prause သည်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များမှမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်သူမထုတ်ဝေသောဘာသာရပ် ၂၈၀ ၏ပြောဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအပြီးတွင်အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အစောပိုင်းကဝန်ခံချက်အားဖြင့်မတည်ရှိနိုင်သူ IIEF ဘာသာရပ်များတက် conjures ။ ထို့နောက်သူက uro- မီးယပ်သားဖွားမီးယပ်အထူးကု Isenberg ကို“ အရူးဆန့်ကျင်ရေးအုပ္စု” ဟုခေါ်သည်။ ဂူဂဲလ်ကိုသူ့နာမည်ကိုအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ သူကရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာ addressing မပါဘဲလည်။
အဘယ်ကြောင့်ရှိပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပွင့်လင်း Access ကို Prause သည် P&P စာရွက်စာတမ်းနှင့် Isenberg သို့သူမ၏ပြန်ကြားချက်နှစ်ခုလုံးတွင်မှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များစွာကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသလား။ အဘယ်ကြောင့် Isenberg ၏မေးခွန်းများကိုအလေးအနက်ထား။ ပညာရှင်ပီသစွာဖြေကြားခြင်းမခံရပါသနည်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ED နှုန်းရုတ်တရက်မြင့်တက်လာခြင်း၏အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်ကြောင့်အလေးအနက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမရှိသနည်း။ နှုန်းထားတွေတဟုန်ထိုးတက်လာတယ် လုလင်တို့သည်လှည့်ပတ် 30% အထိ။